🥇 ▷ Ciyaarta Jumanji & # 039; s ciyaarta: Xiddigaha Cayaaraha Video-ga ah qaab ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay iyo dareenka ay na ka baxaan ma ahan kuwo aad ufiican ✅
Ciyaarta Jumanji & # 039; s ciyaarta: Xiddigaha Cayaaraha Video-ga ah qaab ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay iyo dareenka ay na ka baxaan ma ahan kuwo aad ufiican
Sanadkii 2017 Jumanji wuxuu ku soo noqday shaashadda weyn isagoo leh xiddig filim Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart iyo Karen Gillan, oo daawadayaasha kaga taga dareenka dhammaan noocyada markay isbarbar dhigayaan filimka muuqaalka leh ee uu jilay Robin Williams 90-meeyadii.
Si kastaba ha noqotee, Ciyaarrada Tooska ah iyo Bandai Namco ayaa ku dhawaaqay bilo ka hor horumarka Jumanji: Ciyaarta Fiidiyowga, oo hadda iftiimisay ciyaarta hore. Runtu waxay tahay markaan aragnay wax badan waxaan ka baqeynaa inay ka fogaan doonto inay noqoto mid ka mid ah kuwa sifiican loo siidaayo bisha Nofembar.
Waxay noqon doontaa a ficil ficil kuwaas oo jilayaasha waaweyn ee kaladuwan ay ula dagaali doonaan iyagoo salka ku haya dharbaaxo ka soo gaadha cadawga badan iyo dugaagga duurjoogta ah heerar kala duwan iyada oo la uruurinayo khasnado lana raadinayo qaabab lagu ku noqdo guriga. Waa suurta gal in la ciyaaro kali ama shirkada sadex qof oo kale Thanks to multi-multiplayer iskaashi-wadaag ah
Mid kasta oo iyaga ka mid ah wuxuu u muuqdaa inuu leeyahay weerarkiisa iyo awoodo u gaar ah, laakiin ugu yaraan horumaarkan ugu horreeya wuxuu ka tagayaa wax la doonayo. Sikastaba, hadaad runti xiiseyneysid inaad heshid, Jumaji: Ciyaarta fiidiyowga ayaa ku dhici doonta dukaamada xiga Nofeembar 15 loogu talagalay PS4, Xbox One, Nintendo Switch iyo PC.
La wadaag Gameplay-ka Jumanji: Xiddigaha Video Game-ka qaab ciyaareedkiisa ugu horreeya iyo dareenka ay naga baxaan ayaa aad ufiican